iPhone ကိုမချိတ်ဆက်တဲ့ AirPods တွေကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ - ဘယ်လို
iPhone ကိုမချိတ်ဆက်တဲ့ AirPods တွေကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။
ကောင်းပြီ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ AirPods ကိုယခု ၄ နှစ်နီးပါးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်ထိထိုသို့သောမတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ အသေးဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် AirPods Pro ထက်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မိသားစုတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ် တ ဦး တည်း၏။ ဒါပေမဲ့၊ AirPods iPhone ကိုချိတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်းပြfacingနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလား။ ဤအမှားကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်ဤလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။
သင်သည်ဂီတကိုနားထောင်နိုင်သည်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတက်ရောက်နိုင်သည်၊ သင်၏စာများကိုဖတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ကိုပန်းသီးမဟုတ်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ Siri ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ လုံလောက်သောဘက်ထရီအရံရနိုင်သည်။
အလွန်ထိရောက်၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပြီးလွယ်ကူသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်သော်လည်းသင်၏ AirPods သည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသည်။ မဟုတ်လား။ အဲဒီထဲကတစ်ခုက AirPods ဖြစ်ပြီးသင့် iPhone နဲ့မဆက်သွယ်ဘူး။ တဖန်သင်တို့အားသွင်းစရာကိစ္စတွင် 'ခလုတ်' တစ်ခုသာရှိနေသောကြောင့်သင်အဘယ်အရာကိုကူညီမည်နည်းဟုသင်တွေးမိနိုင်သည်။ Plus အားသင်၏ iPhone သည် AirPods နှင့်တွဲဖက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊
သင်၏မျှော်လင့်ချက်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးသင်၏နောက်ဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာအဖြစ် Apple စတိုးသို့မပြေးမီကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချပါ၊ ဤအကြံပေးချက်များကိုရယူပြီးကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ တဖန်သင်ကသင်၏ AirPods ကိုတဖန်ပျော်မွေ့ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
AirPods Case မအားသွင်းပါ
Apple AirPods Pro နှင့် AirPods 2
- iPhone7ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်သည့် AirPods များကိုပြင်ဆင်ပါ
၁။ သင်၏ AirPods များသည်လုံလောက်ပါသလား။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ ၄ င်းတို့ကို iPhone နှင့်ရုတ်တရက်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုတွဲရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်ဘက်ထရီကုန်သွားသည်ဟူသောကန ဦး အချက်ကိုမေ့သွားခဲ့သည်။ဒါကြောင့်နောက်အဆင့်ကိုမသွားခင် AirPods မှာလုံလောက်တဲ့ဘက်ထရီရှိဖို့လိုတယ်။
အကယ်၍ သင်ဘက်ထရီပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာပါက၎င်းကိုအားပြည့်ပြည့် ၀၀ ပေးရန်အမြဲတမ်းပိုကောင်းပါသည်။သင်၏ AirPods သည်အားသွင်းအမှု၌ရှိနေပြီး status light သည်အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားသောအခါ AirPods သည်အပြည့်အဝအားသွင်းပေးသည်။
2. သင်၏ Bluetooth ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ iPhone ကိုသင်၏ Bluetooth ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာစေရန်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။Bluetooth ကိုဖွင့်ပြီး Airpods မဆက်သွယ်သေးသည်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ iPhone ကို 'setting ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင်၏ AirPods ဘေးရှိ“ i” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ရှိပေါ်လာသော 'ဤစက်ပစ္စည်းကိုမေ့သွား' 'option ကိုနှိပ်ပါ
အခုဆိုရင် AirPods နဲ့အားသွင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းရဲ့ iPhone နဲ့ဝေးလိုက်ပါ
စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည့်အခါ Airpods အားသွင်းအဖုံး၏အဖုံးကိုပိတ်ပါ
ပြီးရင် iPhone နားမှာအဖုံးဖွင့်ပါ။
ဤအရာသည်ဆက်သွယ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်မည်သည့်စနစ်ချို့ယွင်းချက်ကိုမဆိုပြင်ဆင်ပေးပြီးသင်၏ AirPods သည်မလွယ်ကူဘဲတွဲဖက်လိမ့်မည်။
3. သင်၏ AirPods reset
AirPods တွင်တွေ့ရသောအဓိကစနစ်အမှားအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနှင့်စမ်းသပ်ပြီးသောနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုလုံးဝပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ charging case မှာခလုတ်တစ်ခုသာရနိုင်တဲ့အတွက်အခုဒီဟာကရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်။ သို့သော်ဤအခြေအနေသည်လိုအပ်သောခလုတ်ဖြစ်သည်။ဤတွင်သင်၏ AirPods ချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်စတင်နိုင်ပုံဖြစ်သည်။
သင်၏ AirPod များကိုအားသွင်းသည့်အိတ်ထဲတွင်ထားပါ။ အဖုံးဖွင့်ထားပါ။
စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည့်အတွက်အားသွင်းအမှုရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
သငျသညျအမှု၏ status အလင်းယခုပယင်းတောက်ပနေသည်ကြောင်းအလိုတော်။
သင်၏ AirPods ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်ကိုသင်သိသောအချိန်ဖြစ်သည်။
AirPods ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုသင် iPhone နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
4. သင့် iPhone တွင်လိုအပ်သော software ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ
သင်၏ iPhone တွင်သင်၏ AirPods ဗားရှင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့်အသစ်သော software မရှိပါကပြနာရှိနိုင်သည်။
အောက်မှာသင့် iPhone အတွက်လိုအပ်သော iOS version များစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
AirPods Pro တွင် - သင်သည်သင်၏ iPhone တွင် iOS 13.2 နှင့်အထက်လိုအပ်လိမ့်မည်
AirPods (ဒုတိယမျိုးဆက်) တွင် - iOS 12.2 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျရန်လိုအပ်လိမ့်မည်
AirPods (ပထမမျိုးဆက်) တွင် - iOS 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျရန်လိုအပ်သည်
သင့်စက်မှာအထက်ဖော်ပြပါ iOS ဗားရှင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲဒါကိုမွမ်းမံရန်သင်အမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာရှိသည်။သင်၏ iPhone ကို update လုပ်ရန်သင်၏ကိရိယာသည်ဘက်ထရီအလုံအလောက်ရှိစေရန်နှင့် wi-fi နှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယေဘူယျကိုအသာပုတ်ပါ> ဆော့ဝဲလ်ပြောင်းခြင်းကိုနှိပ်ပါ။
၅) Low Power mode ကိုပိတ်ပါ
power level ကျလာရင် plug-in point တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ iPhone Air နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသော AirPods ပြissueနာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း low power mode ကအချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်၊ ဒါကြောင့် Bluetooth connection ရှိနိုင်တယ်။
low power mode ကိုပိတ်ရန် -
ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီး> ဘက်ထရီကိုကလစ်နှိပ်ပါ> စွမ်းအင်နိမ့်စွာပိတ်ပါ။
လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်စေရန်အတွက် control center သို့ power low mode ကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။
ချိန်ညှိချက်များ> ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ> စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှုများ> စွမ်းအင်နိမ့်စွာထည့်ပါ
ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ကွန်ယက်၏ဆက်တင်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ တဖန်သင် AirPods အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီးအစကတည်းကတွဲဆက်မှုကိုစတင်မည်။ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုအောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည် -
၇။ iPhone setting အားလုံးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
အထက်ပါအဆင့်သည်မကူညီပါကအမှားတစ်ခုခုကိုဖယ်ရှားရန်သင်၏ကိရိယာ၏ဆက်တင်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းနိုင်သည်။ကောင်းမွန်သော၊ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာ iPhone settings အားလုံးကို Factory mode သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။မင်းလုပ်နိုင်တာက
'setting အားလုံးကို reset' ကိုရွေးပါ
ဤအချက်သည်သင်၏ iPhone မှမည်သည့်ဒေတာကိုမဆိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဆင့်သည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အလွန်လုံခြုံသည်။ ၄ င်းသည်ကွန်ယက် ဦး စားပေးမှုများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများကဲ့သို့သောဆက်တင်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါလိမ့်မည်။ သင်၏ဝိုင်ဖိုင်စကားဝှက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုကောင်းလိုပေမည်၊ အပြင်အဆင်များ မှလွဲ၍ သင်၏စက်ထဲရှိဒေတာများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြန်လည်စတင်မည်မဟုတ်ပါ။
8. iPhone ကို Restart လုပ်ပါ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါတို့စက်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်ငါတို့အားလုံးလုပ်တဲ့အခြေခံအဆင့်ပဲ။ ပြီးတော့ဘာလို့ဒီကိုစမ်းကြည့်တာလဲသင်၏တွဲဖက်မှုအားတားဆီးခြင်းနှင့်သင်၏စက်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အသေးစားချို့ယွင်းမှုတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
သင့် iPhone ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်ဤကဲ့သို့သောအခြေခံကျသည်။
သင်၏စက်ကိုပိတ်ထားရန်စက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပါ။
ပြီးရင်ဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဖန်သားပြင်ပေါ်က Apple logo မတွေ့မချင်းကိုင်ထားပါ။
iPhone (SE မျိုးဆက်) အတွက် power နှင့် volume ခလုတ်နှစ်ခုလုံးအစား power button ကိုသာဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ
၉။ သင်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သင်၏ AirPods သည်သင်၏အဓိကအသံထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းသေချာစေပါ
သင့် iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခြားကိရိယာများရှိကောင်းရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ AirPods မဟုတ်သောအဓိကကိရိယာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာပြောနေတဲ့ AirPods သည်သင်၏ iPhone ၏အဓိကအသံထုတ်လွှင့်မှုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေလိုသည်။၎င်းကို control center မှအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
၁၀။ သင်သည် Apple မဟုတ်သော AirPods ကိုအသုံးပြုနေပါက
အကယ်၍ သင်သည်ပန်းသီးမဟုတ်သည့် AirPods ကိုအသုံးပြုပါက၊ ပထမအားဖြင့်၎င်းတို့ကို AirPods ဟုမခေါ်ဆိုပါ။ AirPods သည်အမျိုးအစားတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအက်ပဲလ်၏ကြိုးမဲ့နားကြပ်များသို့ပေးသောနာမည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်သည်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းတို့အားသူတို့၏အမည်များဖြင့်ခေါ်လိမ့်မည်။ဥပမာ BoAt ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကို Airdopes ဟုခေါ်သည်။ဆူညံသံကို 'Air Buds' ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
ယခုအခြားကုမ္ပဏီကြိုးမဲ့နားကြပ်ဘူးသည်ယခင်ကဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း၎င်းတို့သည် i-devices များနှင့်အမြဲချိတ်ဆက်လိမ့်မည်မသေချာပါ။ဒါကြောင့်သင်က iPhone နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တခြားကုမ္ပဏီရဲ့ဘူးသီးတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ AirPods ကိုကော်ပီကူးဖို့ကြိုးစားနေတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အထက်တွင် AirPods ဆက်သွယ်မှုပြwithနာအားကူညီရန်လွယ်ကူသောအခြေခံအဆင့်များရှိပါသည်။သင်၏ iPhone ကို ၅-၆ ကြိမ်ခေါက်ဖွင့ ်၍ ပိတ်ခြင်းကိုသင်ကြိုးစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်ထပ်မံအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ဤဖြေရှင်းချက်များထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ပြproblemနာအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပြီးသင်၏ AirPods သည်ယခုသင့် iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်သည်။အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်များထဲမှတစ်ခုခုသည်အထောက်အကူမပြုလျှင်၊ သင်၏ AirPods ယန္တရားကိုအသုံးမပြုမီ Apple support ကိုအမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်သင့်သည်။
iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးနားကြပ် 12
Roblox Error Code 267 - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းချက်များ
Disney Plus အတွက်အကောင်းဆုံး VPN (2020) - ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလွယ်တကူကြည့်နိုင်သည်
ရုပ်ရှင်များကိုအွန်လိုင်းမှလွှင့်ထုတ်နိုင်သော site များ
windows မှာ itunes ကို download လုပ်နိုင်သလား
www watch32 com ကပိုကောင်းတယ်
steam folder ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
ကွန်ပျူတာမှာ instagram မှာ dm ကိုမင်းသုံးလို့ရလား
desktop ပေါ်တွင် chromecast ကိုတပ်ဆင်ခြင်း